कला शुष्मा बराली
नग्नता के हो ? नग्नतालाई उछ्रिङ्खलताको संज्ञा दिएको समाजलाई नग्नताको सौन्दयता देखाउँदै, बुझाउँदै छन् केहि थान कलाकारहरू ललितपुरस्थित एमक्युब आर्ट ग्यालरीमा ।
माटोबाट बनाइएका सजावट सामग्रीले घरमित्र मात्र होइन आँगन र बगैंचाको सौन्दर्य पनि बढाइरहेको छ।
७५ मा दोस्रो स्नातकोत्तर
७० वर्ष पार भइसकेका उमेश्वरमान र केशरीमाया प्रधानले अवकाशपछिको जीवन निष्क्रिय हुन थालेपछि छोराबुहारीलाई समेत जानकारी नदिई स्नातकोत्तर भर्ना भएका थिए।
जलनपछिकाे जीवन: जसले हिम्मत जुटाए घरेलु हिंसा, दुर्घटना र एसिड आक्रमणमा परेका किशोरी र महिलाहरूले पारिवारिक तथा सामाजिक चुनौती चिर्दै संघर्ष गरेर उदाहरणीय आत्मबलको परिचय दिइरहेका छन्।
एउटा यस्तो प्रेम–यात्रा प्रेम के हो, आत्मीयता कसरी हुन्छ, माया\_प्रेमको अभिव्यक्तिको माध्यम के ? आदि प्रश्नको उत्तरलाई चित्रकला मार्फत प्रस्तुत गरेका छन्, ईशान परियार र सविता डंगोलकाे जोडीले ।
'फेल्ट'का सजावट फेल्टका सामग्रीको प्रयोग व्यापक हुन थालेको १८औं शताब्दीबाट हो । रूसीहरूले परम्परागत रुपमा फेल्टबाट बनेका ‘रसियन भालेन्की’ भनिने जुत्ता प्रयोग गर्थे । १९औं शताब्दीमा पश्चिमा देशहरूमा फेल्टबाट बनेको ‘टप ह्याट’ निकै रुचाइन्थ्यो । टप ह्याटले फेसनको रुप लिएपछि फेल्टबाट अन्य सामग्री पनि बन्न थालेका हुन् ।
महिला गाइडले खेप्नुपरेको आम प्रश्न, “बाहिर बाहिर हिंड्छे, यस्तालाई कसले बिहे गर्छ ?” परिवार र समाजको तगारो पन्छाउँदै महिला गाइडहरू पर्यटकलाई अग्ला हिमालदेखि विकट कन्दरासम्म पुर्‍याउन सफल छन्।
न्यानो पहिरन मौसम विचार गरेर खोज्न जान्नेलाई बजारमा उपलब्ध विभिन्न खालका फ्याब्रिकले चिसोमा धेरै लुगा खापेर लगाउन मन नपराउनेलाई पनि विकल्प दिएको छ।
महिला प्रकाशक सम्पादनदेखि व्यवस्थापनसम्ममा पुरुषको दबदबा रहेको नेपाली प्रकाशन व्यवसायमा थोरै संख्यामै भए पनि महिलाको नेतृत्वले परिवर्तनको छनक दिन्छ।
अब नेपालकै विद्युतीय ‘यात्री मोटरसाइकल्स्’ ‘यात्री मोटरसाइकल्स्’ ले नेपालमा पहिलो पटक दुई पाङ्ग्रे विद्युतीय मोटरसाइकल उत्पादन गरेर बजारमा ल्याउने तरखर गरिरहेको छ।
गढीमाई मेला: बलिको विकल्प पशु अधिकारका पक्षमा भएका अभियानलाई गढीमाई मेला सञ्चालन तथा विकास समितिका पदाधिकारी र स्थानीयले पनि साथ दिएपछि बलिको विकल्प खोज्न थालिएको छ।
जाडोमा प्रविधि: उपयाेग र सुरक्षा चिसोबाट बच्न प्रयोग गरिने उपकरण र तौरतरिकाबारे समयमै सचेत हुन सके ठूला दुर्घटनाबाट जोगिन सकिन्छ।
बादी विद्यालयकाे बिजाेग नर्सरीदेखि १ कक्षासम्म पढाइ भइरहेको विद्यालयका १७३ बालबालिकाले न पुस्तक पाउँछन् न त कापीकलम र खाजा नै। शिक्षकले तलब नपाएको पनि ९ महीना भइसकेको छ।
गढीमाई बलिका मारक भन्छन्– माताको नाम लिएपछि मात्र आँट आउँछ (भिडियाे सहित) बाराको खोपवा गाउँका रामभु पासवान गढीमाई मन्दिरमा ६ पटक मारकको रूपमा मार हानिसके ।
वादी युवाको संघर्षः काठमाडौँमा ज्यालादारी लम्कीमा प्रधानाध्यापक
कैलालीको लम्कीचुहा–३ बलचौरका राहुल बादी (२२) स्नातक पढ्ने खर्च जुटाउन २०७३ सालमा मजदुरी गरेर भारतबाट फर्किँदा गाउँमा विद्यालय खोल्ने तयारी हुँदै थियो । बादी बस्तीमा १२ उत्तीर्ण गर्ने उनी मात्र थिए ।
टौदहका प्रेमिल हाँस
“मान्छे जहाँ पुगे पनि फर्केर आउने अन्तिम गन्तव्य घर नै हो, गन्तव्यको अन्त्यलाई बुझाउन घरको नाम जिरो माइल राखेको हुँ ।”
सडकमा सारङ्गी बजाउने लोक–संगीतका स्नातकोत्तर मिनु
'सरकार, मेरो बुबा खोइ ?'
ठेचोस्थित माटोको सानो घरको माथिल्लो तलामा बस्छन् । भुईंतलामा पानी पसेर हिलाम्मे छ । नग्मा भन्छिन्, “बुबाको अनुहार मेरो धमिलो सम्झना छ तर बहिनीलाई सम्झना नै छैन ।”